Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo warisay seddex dhimasho oo kale oo ka dhacay Gobolka | KWIT
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay wali waxaa furan furitaanka rugta talaalka oo loo qorsheeyay Isniinta Xarunta Dhacdooyinka Tyson. Ballamada waxaa loo qoondeeyay dadka naafada ah ee guryahooda lagu daweeyo, iyo waliba shaqaalahooda daryeelka. Saraakiisha ayaa rajeynaya in tani ay noqon doonto dhacdadii ugu dambeysay ee tallaal. Si kastaba ha noqotee, xarun caafimaad oo mustaqbalka ah ayaa laga abaabuli doonaa iyada oo loo marayo Mary J. Treglia Community House. Faahfaahin wali waa laga shaqeynayaa.
Waxaa lagu qiyaasaa 20% dadka degan Degmada Woodbury inay heleen qaddarkoodii ugu horreeyay ee tallaalka iyadoo 4.5% ay labaduba qaateen.
Saraakiisha ayaa sheegay in halista fatahaad ee webiga Missouri uu yaraan doono sanadkan. Taasi waa sababta oo ah xaaladaha qalalan iyo heerarka barafka yar ee waqooyiga.
Ciidanka Mareykanka ee (Injineerada) Injineerro ayaa kordhiyay xaddiga biyaha ka soo baxaya Gavins Point Dam oo u dhow Yankton, South Dakota. Laakiin wabiga wali wuxuu kujiraa heer hoose oo kusii jeeda guga.